Yiziphi izinhlelo ezikhona zeDesdeLinux ngo-2012? | Kusuka kuLinux
Yiziphi izinhlelo ezikhona zeDesdeLinux ngo-2012?
U-Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | KusukaLinux
Khona kanye ku- mayelana nokuvakashelwa okungama-200.000 Ngibatshele ukuthi yebo, akuyona yonke into ebimnandi, kube nezinkinga nezimo ezingathandeki kuwo wonke umuntu.
Inhloso yethu yokuqala ukuqeda lezi zinkinga ngokushesha okukhulu, futhi ngenxa yalokhu sesivele sisebenza 😉
Ngaphezu kwalokho, sinethemba lokuthi sizokulethela isimanga esithandekayo ngayo leyo nyanga kaJanuwari 😀 Sizozama ukumba sijule kwasekuqaleni, singazikhawuleli kusukela ekuqaleni, ngicabanga ukuthi lokhu ngomzamo omkhulu nomsebenzi kuyisihluthulelo sempumelelo yangempela.
Sithanda futhi ukuba noshintsho olusha emfanekisweni wethu, sithuthukise umqondo kanye nobunikazi be- <° I-Linux, nakwitimu / itimu yethu (isici esibukwayo) seBlog. Lokhu kuzothatha isikhathi eside, ngoba lokho esifuna ukukufeza kuyinkimbinkimbi ngokwendlela yobuchwepheshe.
Zama ukuqhubeka nokuqwala isihloko esithi "umphakathi", nakanjani ingqungquthela yethu. Ukuze ube umphakathi lapho kubusa khona ikhwalithi yama-athikili, ikhwalithi yokusekelwa, umoya omuhle, abasebenzisi abangazizwa beziqhenya ngokuba yingxenye yalokhu… yilokhu esifuna ukukufeza. Ngo-2012 sizothatha izinyathelo eziningana ukusondela kulo mbono esinawo, sinethemba lokuthi uzokuthokozela lokho.
Siyakwazi esikufunayo, sinakho kucace bha, futhi lokhu sekuvele kungukuthuthuka okuhle 🙂
Sithanda futhi ukwethula umncintiswano ongakaze ubonwe kunoma iyiphi i-Free Software noma i-Open Source site, ngoba lokhu okubaluleke kakhulu kungaba yisici sezomnotho, ngakho-ke… sifisela inhlanhla LOL !!!
Futhi, bekungeke kube kubi ukuvuza ababhali ababhala izindatshana ezihamba phambili, akunjalo? Kufanele sicabange indlela yokuhlola lokhu, okunye ngaphandle kwe +1 elula noma -1 kuma-athikili, indlela enenjongo yokuhlola i-athikili ngayinye. Uma lokhu sekufeziwe, singacabanga ukuthi singabavuza kanjani 😉.
Ngishilo ngaphambi kwesici sezomnotho, futhi akuyona imfihlo ukuthi izindleko zikhona.
Asihleleli ukufaka ukukhangisa kusayithi, ngoba sicabanga ukuthi kuvimbela kuphela, kuyacasula kanti imali engenayo icishe ibe zero. Sizobe sesicabanga ngenye indlela yokwenza imali ngaphandle kokuthi kube khona lokho kucasulwa okucasulayo 😉
Futhi, okwamanje yikho lokhu 🙂
Yilokhu esikufisayo <° I-Linux ngo-2012, lokho esifisa ukukufeza.
Manje ... umbono obaluleke kakhulu yilowo ozolandela ...:
Ufunani nge <° Linux ngo-2012?
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » KusukaLinux » Yiziphi izinhlelo ezikhona zeDesdeLinux ngo-2012?
Hawu mngani, konke kuzwakala kukuhle !!! Ngeke ngilinge ukufaka noma ukususa noma yini enye. Mhlawumbe ukuphela kwento engingayithanda, mathupha, ukuthi zonke izinhloso zingahlangatshezwa 😀
Ngiyayithanda isiza kanjalo. Umbuzo nje, ngidingani ukuze uDebian wami abe nguDebian, ngoba ngibhala kusuka ku-iceweasel eDebian futhi kuvela ku?.
Shintsha i-Iceweasel UserAgent, ufake injini yokusesha yebhulogi «useragent iceweasel» bese uthola
Yebo, ngifuna uyeke ukudlala amabhola ami ngento ye-EMO.
Angazi ngempela, kubonakala kimi ukuthi kulungile njengoba kunjalo
Qhubeka futhi zonke lezo zinhloso ziyafezeka.
Ingqikithi enezinguquko ezimbalwa kakhulu ingaxazululwa, ngithanda ukuthi ziyi-minimalist kepha zihlala zine- "usability". (umbono wami)
Esihlokweni esithi "umphakathi", usuvele ufeza kancane kancane izinhloso ozidingayo, nangu ngisekhaya, izindatshana zinekhwalithi eningi futhi "zinomsebenzi" omkhulu kakhulu sengikwazile izinyanga ezi-2 futhi ngikulandela nsuku zonke.
Izifiso ezinhle zonyaka wezi-2012
Ngiyabonga kakhulu Santi, sikufisela nezinto eziningi ezinhle futhi siyakwamukela 😀
Sawubona futhi wamukela uSanti 😀
Lokho esifuna ukukufeza sengivele ngakushilo, kuyinkimbinkimbi ngokwedlulele ngokombono wezobuchwepheshe, siyethemba ukuthi ngaphambi konyaka wezi-2012 singakwazi ukukufeza (sisesigabeni sokuklama hehe).
Odabeni lomphakathi, ngikholwe, sisanda kuqala nje started
Ngiyabingelela futhi empeleni, ngiyabonga kakhulu ngombono wakho, ukuphawula okunje yilokhu okusenza sifune ukuqhubeka nokubhala 😀
Ukuphela kwezinto engingacela ukungaziguquli ama-vibes amahle akhona kanye nenqubomgomo yokungazakhi izingqikithi ezivuvukalayo nezisontekile. Iqiniso ukuthi sengivele nginesithukuthezi ngalezo zindawo lapho zikhona noma zikhona "Anti-X" noma kukhona "Pro-X" ngokweqile.
Yebo ... ngokwakhiwa, vele wenze ilogo ivelele kancane, ngiyibona inamahloni kakhulu.
Bonke abanye bazofika ngokungeziwe.
Haha kubi kakhulu, nansi i-Anti Ubuntu ngokweqile ...
Nayi i-anti-apple XD
Futhi nakhu okunye
Okungaba kuhle yinguqulo ephathekayo yekhasi, kwesinye isikhathi ecasulayo ukubheka ikhasi kuselula ...
Ukubingelela, futhi sikufisela inhlanhla ku-2012 🙂
Ngifisa kuphela ukuthi izinhloso ezibekwe yilo mphakathi omangalisayo weLinux zifezeke ngezindlela ezahlukahlukene ezinhlelweni ezisebenzayo, ngaphezu kwakho konke ngifisa ukuthi i-linux ekugcineni ibuse ngaphezu kwezinhlelo ezisebenza ngezigaba, iqinisekise izimpilo zabantu, futhi ngiyethemba lo mphakathi uyaqhubeka ukwanda, ngiyazisola ngokungakwazi ukuthatha isikhathi empilweni yami ematasa ukufunda kabanzi nge-linux nokunikela emzameni wokuthuthukisa lolu hlelo ukuhalalisela bonke abenza kube nokwenzeka ukuthi bangaziwa ngomzamo wabo onzima abaningi bethu abakujabulelayo ukuba uhlelo lune-linux nezinhlelo zalo ze-animo !!!!!! phezulu linuX !!!!!!!!!!!
Sawubona futhi wamukelekile 😀
Uyakwazi okushiwoyo…. «Akukaze kwephuze uma injabulo yinhle»😉
Usenesikhathi sokufunda iLinux uma kuyilokho okufunayo, udinga nje ukukufuna 😀
Ngiyabonga ngokuma kwakho nge-haha.
Yize ukuphawula engikukwenzile ngokuwina kungenxa yokuthi ikhompyutha yami yonakele futhi lokhu kuvela esihlotsheni esingiboleke sona ngakho-ke sengivele ngiphuthelwa amamenyu wami nezinhlelo ze-linuX
Ngifisa sengathi abanye babantu abasondele lapha bathole izintombi futhi bazijabulise ukuze bangakhonondi kangako ... bahlupheka ngaphezu kwesibuko sikaCelia Cruz
Ngakho-ke i-KZKG ^ Gaara, ngoba abanye abanezintombi bebengakhala futhi bakhale njengama-emos angempela.
Ukuqonda lokhu kuzomele ungibone ngicasukile bukhoma, yingakho ungaqondi
Ngabe ungabeka isivivinyo sokuma kwedeskithophu ku-linux 😉 ngicabanga ukuthi kungathokozisa ukubona izikhathi zenqubo esigungwini nezibonelo zokucindezelwa / ukwehla kwamandla kanye nezibalo ze-arithmetic. Gcwalisa isifiso sami 😀
Iphuzu engilithanda kakhulu ngale bhulogi ukubukeka kwayo, kulula kakhulu: D.
Okwe "izikolo" ozicabangayo nge-taringa.net
I-ZukiMac: Ingqikithi ye-Xfwm ephefumulelwe yiNgonyama
I-Android inokusebenza kwansuku zonke okungu-700.000